(REVIEW)GII WASIIRKA WAXBARASHADA SOMALILAND EE TODOBAADKAA | Oodweynenews.com , Oodweyne News, OODWEYNENEWS
(REVIEW)GII WASIIRKA WAXBARASHADA SOMALILAND EE TODOBAADKAA
April 20, 2017 | Published by: own
Wasiirku waa hogaamiye wasaaradeed oo xil aad u weyni saaranyey,waa inuu qof (intectual )ah noqdaa oo shaqadiisa iyo hadalkiisa wax qabadkiisu karti iyo hufnaan ku dhisan tahay. Waa heer qofka gaadhayaa ay tahay inuu salaanka maamul meel hoose kasoo qabsaday sida maamule ku xigeen iyo maamule,isu duwe maareeye Gudoomiye gobol dabeed u bisil yahay ummad nooceeda kasta sida loo horuumariyo loola hadlo loo dhaqaaleeyo markaa ka dib kursiga wasiirnimo uu badhida saari karaa. Waa inuu buuxaa oonuu ruxmayn marxalad kastuu dadweyne la kulmayo ama saxaafadda . waxaa laga sugayaa wasiir kasta mar kasta macluumaad dhaba oo huffan waa inuu goor kasta (well equiped )ahaada (at least )wixii wasaaradiisa khuseeya. Waxan dadka isu kiinkeenay waa kursigooda iyagu kumay soo doonan kumanay aqoon ee adaa soo doontay markaa waxa lagu weydiin karaa markaad shaqada ku jirto waxaa ka mida wax kastoo wasaarada ay hawsheedu tahay . Hadday mulcaamado tahay hadday mushaahaarooyin tahay hadday jaamacado tahay hadday saami qaybsi iyo scholarships tahay hadday caafimaadka iyo dugsiyada dhis tahay waxaas soo dhan inaad si runa oo nadiifa Uga jawaabtaa lagaa rabaa. Labadii todobaad ee u dambeeyey xaalkaagu aad buu u foolxumaa adduunkoo dhan waa lagaa daawanayaayey Anigoo (live) ah.
Jaamacad baad bilaa sharci ku xidhay 600 arday jaamacadeed baad RRU (RAGGA REERAA UDHACA) U DIRTAY OOD WAXBARASHADII KA DHOOQAYSAY OO tahriib u dirtay oo weliba mudaharaadkoodii soconayaa. Wiigan Laascaanood baad tagtay inan weriye ah baa su’aal aad u muhiima kuwo weydiiyey oo ku yidhi ‘SCHOLARSHIPS BAAD TIDHAAHDEEN LAASCAANOOD BAAN WAX KA SIINAY WAXNA MAYDIN SIIN EE BAL WASIIR ARINTAA KA WARAN ‘ intaad sida qaadwalaha gacmaha taagtaagtay baad weliyihii aflagaadaysay jawaabna aad si cad u diiday. Runtii su’aasha waxa ku weydiinaayey waa reer Laascaanood ee weriyuhu wuu siday uun.ta labaad wasiiro badani marka microphone ka lagu soo taago waxay la tahay tuugxabbad lagu qabtay oo kale arinkuna sidaa maahaa ee microphone ku qofka madaxda ah ee waxqabad ka buuxa waa u fursad qaaliya oo uu dadka waxqabadkiisa Uga baahiyo cadho na ka reebban. Wasaarada wax barashada waa wasaaradda ugu baahida badan ee weliba dadka dhalinyarada ku taxaluqda. Intaasoo soo qof baa mushaarooyin bilaasha ka qaata dawladda oo shaqayn kari lahaa wasiirka wax barashadu xaqbuu u leeyahay inuu lacag soo dhiciyo oo macalimiin ta gunnad iyo tareerin Uga dhigo madaxweynaha ka dalbado.
Wasiirada iyo madaxdu markay khudbad u baxayaan ama shaqo safar waa inay diyaar garaw buuxo ah sameeyaan waa inay fadeexadaha iska jiraan aqoon darodooda bannaanka soo dhigaysa sida Muuse Biixi ootodobaadkii dhoweyd dhulka ka qoday carbohydrate(SUBXAAN).